Minnesota Operation Lifesaver, Inc. : Intee ayay ku Qaadataa in Tareenku Joogsado?
Tareenadu si dhakhso ah uma joogsan karaan umana leexan karaan. Tareenka caadiga waxa uu le'egyahay 1 ilaa 1¼ mayl dhereer ahaan (90 ilaa 120 gaari-tareen ayuu ka koobmaa). Marka uu tareenku ku socdo xawaare dhan 55 mayl saacaddii, waxay ku qaadan kartaa hal mayl ama ka badan si uu u joogsado kadib marka uu bareega deg-degga ah qabto injineerka tareenka. Tareenka ka koobma 8-gaari kuna socda 80 mayl saacaddii waxay ku qaadataa hal mayl in uu joogsado. Sidee ayaan ugu bar-bar dhignaa baabuurta caadiga ah?
Baabuur fudud ee rakaab ee caadi ah kuna socda 55 miles saacaddii waxay ku qaadanaysaa 200 ee fiit si uu deg-deg ugu istaago-xaaladuhu marka ay fiicanyihiin-taas oo ah, luagaha iyo bareegyada tareenku fiican yihiin wadadana ay qallalan tahay.
Baska ama Faan ganacsigga ah waxa uu u baahan yihiin 230 fiit si ay u istaagaan.
Baabuur ganacsi oo isjiid ah waxa uu ku joogsan karaa 300 fiit-taas oo le'eg hal garoonka kubadda cagta
Tareenka fudud waxa uu u baahan yahay 600 fiit si uu u joogsado- taas waxa ay le'eg tahay labo garoon ee kubadda cagta.
Haddii aan bar-bar dhigno tareenkii caadiga ahaa ee aan kor ku soo sheegnay ee ku socday 55 mayl saacaddii in uu ku qaadan karto baaxad dhan 18 garoon ee kubadda cagta si uu ku joogdsado.
Tareenadu ma leexan karaan-ee waxa ay raaci karaan biraha wadada kaliya. Waxa kaliya oo injineerku samayn karo waa inuu qabto bareegga deg-degga ah.
Wuu ka dheerayaa kana dhowyahay inta aad moodaysid!
Sida diyaaradaha oo kale ee aad moodid in ay aayar u socdaan ayaa indhahaagu ku siri karaan marka uu tareenka soo socdo-waa dhalanteed ah in uu tareenku fogyahay uuna ka gaabiyo inta uu dhab ahaan ku socdo. Ha u bareerin khatarta -way fududahay inuu kaa khaldamo xawaaraha uu ku socdo tareenka iyo inta uu kuu jiro gaar ahaan habeenkii. Haddii aad aragtid tareenka iska sug (inta uu kaa gudbayo).
Laga soo xigaty: Ololaha Naf-badbaadinta